TikTok Ho an'ny Orinasa: Mahatratra ireo mpanjifa manan-danja amin'ity tambajotra horonantsary fohy ity | Martech Zone
TikTok no tanjona voalohany amin'ny horonan-tsary finday fohy endrika, manome atiny manaitra, tonga ho azy ary tena izy. Tsy misy fisalasalana kely momba ny fitomboany:
TikTok dia manana mpampiasa mavitrika 689 tapitrisa isam-bolana manerantany.
Ny rindranasa TikTok dia nakarina indroa maherin'ny 2 miliara tao amin'ny App Store sy Google Play.
TikTok no laharana ho fampiharana ambony indrindra alaina ao amin'ny iOS App Store an'ny Apple ho an'ny Q1 2019, miaraka amin'ny alaina 33 tapitrisa mahery.
62 isan-jaton'ny mpampiasa TikTok any Etazonia dia eo anelanelan'ny 10 sy 29 taona.
TikTok dia nakarina in-611 tapitrisa in India, izay manodidina ny 30 isan-jaton'ny fisintomana erak'izao tontolo izao ny rindranasa.
Raha miresaka amin'ny fotoana andaniany amin'ny TikTok dia mandany 52 minitra isan'andro eo ho eo ny mpampiasa.
TikTok dia misy amin'ny firenena 155, ary amin'ny fiteny 75.
90 isan-jaton'ny mpampiasa TikTok rehetra no miditra amin'ny fampiharana isan'andro.
Tao anatin'ny 18 volana latsaka dia nitombo 5.5 heny ny isan'ny mpampiasa TikTok olon-dehibe amerikana.
Nisy salan'isa video mihoatra ny 1 tapitrisa nojerena isan'andro isan'andro tao anatin'ny herintaona.
Loharano: Oberlo - Statistika 10 TikTok tokony ho fantatrao amin'ny 2021
Amin'ny maha-iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra eran'izao tontolo izao, TikTok dia manome ny orinasa fotoana iray hahatratra vondron'olona mpampiasa lehibe izay manome vahana laharam-pahamehana ny fialamboly sy ny tena fahamendrehana.
TikTok For Business dia iray amin'ireo tambajotra tokana niainana fitomboana lehibe teo amin'ny iOS (tsena 52% tsena). Ny tambajotra sosialy dia niakatra toerana 1 tao amin'ny iOS ho an'ny # 7 ary toerana 1 amin'ny fipetrahana Android amin'ny # 8. Amin'ny haavo sokajy cross-platform dia nahatratra laharam-pahefana 5 ambony indrindra tamin'ny Entertainment, Social, Lifestyle, Health & Fitness, Finance, Photography, ary Utility Group.
Rindrambaiko fampisehoana AppsFlyer
Miaraka amin'ny TikTok Ads Manager, ny orinasa sy ny mpivarotra dia mahazo miditra an-tsokosoko sy mametraka Doka In-App (Imera sasany) na manomboka ny App App finday ho an'ny mpihaino TikTok manerantany sy ny fianakavian'ireo fampiharana. Avy amin'ny lasibatra, famoronana doka, tatitra momba ny fahitana ary fitaovana fitantanana doka - TikTok Ads Manager manolotra anao sehatra matanjaka nefa mora ampiasaina izay hanampy anao hanatratra ny mpihaino izay tia ny vokatrao na serivisinao.
Fampiasana doka TikTok sy endrika endrika
Ianao dokam-barotra dia mety hiseho amin'ny iray amin'ireto toerana manaraka ireto mifototra amin'ny fampiharana:
Fametrahana TikTok: Hiseho amin'ny doka-feed ny doka
Fametrahana fampiharana Newfeed: Hiseho amin'ireto toerana manaraka ireto ny doka:
BuzzVideo: in-feed, pejy antsipiriany, horonantsary post
TopBuzz: in-feed, pejy antsipiriany, horonantsary post
zaza: pejy famelomana, pejy antsipiriany
Fametrahana Pangle: Hiseho ao amin'ny toy ny doka azo lalaovina, Doka horonan-tsary interstitial, na doka video valisoa.
Ny TikTok Ads Manager dia manohana azy roa sary doka sy doka video endrika:
Doka amin'ny sary - azo atao localisation ary ny PNG na JPG dia ekena miaraka amina vahaolana aroso farafahakeliny 1200px ny halavany 628px ny sakany (azo ekena ihany koa ny doka marindrano).
Video Ads - miankina amin'ny toerana tianao hametrahana azy ireo, ny fampitahana ny 9:16, 1: 1, na 16: 9 dia azo ampiasaina amin'ny horonan-tsary 5 segondra hatramin'ny 60 segondra lava ao amin'ny .mp4, .mov, .mpeg, .3gp , na format .avi.
Manolotra TikTok Modely Video, fitaovana iray izay mahatonga ny famoronana doka horonantsary haingana sy mora kokoa. Afaka mamorona doka horonan-tsary fotsiny ianao amin'ny alàlan'ny fisafidianana modely sy fampidirana ny sarinao, ny lahatsoratra ary ny logo.
TikTok: Fizahana tranokala manara-maso
Ny fanovana ny mpampiasa TikTok ho an'ireo mpampiasa tranokala izay mety mitsidika na mividy vokatra na serivisy ao amin'ny tranokalanao dia mora amin'ny pikantsary fanarahana TikTok.
TikTok: Manara-maso fisehoan-javatra amin'ny fampiharana
Rehefa misy mpampiasa iray manindry / mijery doka ary manao hetsika hafa toy ny fisintomana, fampandehanana, na fanaovana fividianana ao anaty rindrambaiko ao anatin'ny fikandrana fiovam-po napetraka dia mirakitra ny mpiara-miombon'antoka amin'ny refy finday (MMP) ary mamerina izany data izany ho any TikTok ho fiovam-po. Ny angon-drakitra fiovam-po, amin'ny fampiasana ny fanovana ankitsoa farany, dia aseho ao amin'ny TikTok Ads Manager ary fototra iorenan'ny fanatsarana amin'ny ho avy amin'ny fampielezan-kevitra
TikTok ho an'ny raharaha fampiasana orinasa: Slate & Tell
Amin'ny maha fivarotana firavaka tsy miankina azy, Slate & Tell dia nikasa ny hanangana fahatsiarovan-tena sy fiheverana mandritra ny vanin-taona farany fivarotana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny TikTok For Business fitaovana mora ampiasaina Smart Video Creative ary fanatsarana ny fanentanana ho an'ny hetsika, dia namorona zavakanto mahafinaritra sy mahaliana nahatratra ny mpampiasa 4M TikTok izy ireo ary niteraka fivoriana tokana 1,000 atao anaty harona fiovam-po, manampy azy ireo hahatratra ny tanjon'izy ireo ny 2X tamberina amin'ny doka-doka ao anatin'ny 6 volana monja.
Atombohy amin'ny TikTok Androany!
Tags: b2cdoka b2cdoka ho an'ny mpanjifaImera sasanydokam-barotra amin'ny fampiharanafametrahana ao anaty appdokam-barotra findayTikTokfametrahana ny tiktok tiktokmpiandraikitra dokam-barotra tiktoktiktok ho an'ny fandraharahanastats tiktokhetsika momba ny tranonkala tiktokdoka videodokam-barotra amin'ny horonan-tsary